Xoghayaha gaashaandhigga Mareykanka oo sheegay in Suuriya xaalad dagaal ay kaga tagi doonin – Radio Muqdisho
Xoghayaha gaashaandhigga Mareykanka oo sheegay in Suuriya xaalad dagaal ay kaga tagi doonin
Xoghayaha Gaashaandhigga Mareykanka James Matisse ayaa meesha ka saaray in uu ijro qorsha dalkiisa iyo dowladaha ay xulafada yahiinn ay kaga baxayaan Suuriya ka hor inta aan nabad laga gaarin dagaalada halkasi ka socda.
Matisse ayaa sheegay in Maraykanka iyo xulafadiisu ay hadda ku jiraan marxaladdii lagu soo gabagabeyn lahaa taariikhda urur diimeedyada ka dagaalama gudaha Suuriya, isaga oo intaa ku daray in aysan dooneynin inay ka baxaan Suuriya inta ay dagaalada ka socdaan.
“Ma dooneyno inaan dib u soo baxno ka hor inta diblomaasiyiinteenu ay ku guuleysanayaan nabad ku soo celinta Suuriya” ayuu Matisse u sheegay suxufiyiinta.
Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa ku adkeeysaneysa in Ciidammadooda ay mudda ku sii sugnaan donaan gudaha Suuriya.
Hadal toddobaadkii hore ka soo yeeray Madaxweyne Donald Trump ayaa shegayay in Mareykanka uu damacsanyahay inuu ka soo baxo Suuriya si dhakhso ah, hase yeeshee Trump ayaa si cad u muujiyay rabitaankiisa ah inuu gabi ahaanba Ciidammadiisa uu kala baxo dalka dagaalada dhinacyada badan ay daashadeen ee Suuriya.
Shir jaraa’id oo uu dhawaan Aqalka Cad kula yeeshay dhiggiisa Faransiiska Emmanuel Macaron ayuu Trump dib u cusbooneysiiyay rabitaankiisa ah in Ciidammadiisa uu kala baxo Suuriya, Laakiin waxa uu carabka ku adkeeyay isla markaasna uusan doonayneyn in Iraan ay saameyn ku yeelato dadaalada nabad raadinta Suuriya islamarkaana gabi ahaanba Gobalka laga saaro.